Addi Bilisummaa Oromoo Fakkeenyummaa Walooma Amantiilee ti!
Date: December 7, 2011Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 07 Mudde 2011) Addi Bilisummaa Oromoo Walqixxummaa fi Kabajaa amantiilee hundumaaf kan dhaabbatee fi kaayyoo kanas kan tiksu ta’u ibse.
Addi Bilisummaa Oromoo ibsa 07 Mudde 2011 baaseen akka beeksisettim mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kana olola dhugaa irraa fagaate biyyattii keessatti facaasaa jiraachuun bira gayameera.
“ABOn akka dhaabaatti didhaalee amantii tuttuqatanii itti dhufan hedduu injifannoodhaan keessa bahe,” kan jedhe ibsi ABO kun dabalee akka hubachiisetti, qabsaawonni ABO hangafni rakkoo bara 1978 keessa Dirree Bahaatti dhalate irra aanuu kan danda’an dhaabni kun amantii irratti ejjannoo loogii hin qabne qabaachuu fi irratti cichuu isaaniitiin ta’uu illee yaadachiisee jira.
Seenaan ABO irraa akka hubatamuttis, bara 1980 keessa hogganni ABO sadarkaa olii odoo dhimma qabsoof gara Soomaaliyaatti imalaa jiruu shiftoota Soomaaliitiin bakka Shinnigga jedhamtutti qormaati lubbuu mudate ilmaan Oromoo bakka fedhetti iyyuu amantiin akka adda hin baane mirkaneessee jira.
“Diinni gaafasii Oromoo tokkicha amantiidhaan adda fooyee gaaga’uuf wayta dhaadatetti qabsaawonni sun seenaa fakkeenyummaa isii bara baraan yaadatamtu galmeessuun waliin wareegaman., ” kan jedhe ABOn dhaamsa isaaa keesstti ‘Nuti Musliimaa fi Kiristiyaanatti
adda hin qoodamnu! Nuti Oromoo dha! Hiree takkittii waliin qabna! Kaayyoo takkaaf manaa baane; kaayyoo takkaaf wareegamnas!!’ jedhee jira.
Previous Previous post: The Freedom Voices of Oromia
Next Next post: Hawaasti Oromoo Australia dirqama Ambaasaadarummaa isaa bahaataa jira